Izvo zvinangwa zveAation Zvishandiso uye Kushambadzira Kuedza Martech Zone
Chishanu, April 22, 2016 Chishanu, April 22, 2016 Douglas Karr
Kune mamwe maitiro mukati medhijitari yekushambadzira indasitiri yatiri kucherechedza izvo zvave kutove nekukanganisa pamabhajeti uye zviwanikwa - uye zvicharamba zvichidaro mune ramangwana.
Kubva pamaonero ekudyara, mabhajeti ekushambadzira masevhisi anokura zvishoma mu2016, kusvika pa1.5% yemari yese yemari. Izvo zvinowedzera zvichasiya kukura kunotarisirwa mumari yemasevhisi, zvisinei, zvichizowedzera kumanikidza kune vashambadzi kuti vawedzere chiyero uye mashandiro nezvishoma zviwanikwa zviwanikwa. Kunobva: ITSMA
Muchidimbu, bhajeti rekushambadzira kwedhijitari riri kuramba richikura uye vatengesi veC-level vava kutarisirwa kuve nemaoko uye vanonzwisisa zvizere kuomarara kwenzvimbo, maturusi aripo, uye nekuzivisa kunodiwa kuti kuvandudze kwekutsvaga kwekambani nekuedza kwekuchengetedza. Tichifunga nezve kuputika kwemikana uye kudiwa kwekukwidziridza kune vakawanda, Tiri kuita zvakawanda nezvishoma… uye zvave kuomarara.
apo vashandi vekutengesa vari kuwedzera, tarisiro yevatengesi kuti vaite zvakawanda nezvishoma zvinoenderera. Uye yakawanda yedzvinyiriro ndeyekuisa mari mukushambadzira maturusi ayo anobatsira kudzikamisa huwandu hwemaawa evanhu anodiwa kupindura, kuronga, kuita uye kuyera kushambadzira.
Otomatiki uye neUngwaru Kurumbidza Kwevashandi, Havavatorere
Sangano redu rinoita rakati wandei rebasa kune mamwe makambani makuru kwazvo. Panguva ipi neipi yezuva, isu tinogona kunge tine 18 kana zvakadaro dzakazvipira zviwanikwa zvinoshanda pane vatengi basa. Kubva kune nyanzvi dzechiratidzo, kune maneja eprojekti, kune vagadziri, kune vanogadzira, kune vanyori vezvinyorwa… rondedzero inoenderera ichienderera mberi nekuenderera mberi. Ruzhinji rweiri basa rwunoitwa kuburikidza nekubatana nemamwe masangano, zvakadaro. Isu tinosimudzira zano uye ivo vanoita iro zano.
Zvishandiso imwe nzira yatiri kukwanisa kuwedzera ekubata pamwe nevatengi uye tarisiro. Isu tinoshandisa muunganidzwa wedashboard, kuripota, kushambadzira munharaunda, uye maturu manejimendi ekushandisa Chinangwa chematurusi iwayo hachisi chega chega chemabasa edu, zvakadaro. Chinangwa chematurusi aya ndechekuwedzeredza iyo nguva yatinozoshandisa isu pachedu nemutengi wese kutsanangura nekuvandudza marongero atiri kuisa.
Sezvo iwe urikutsvaga kuisa mari bhajeti yekugadzirisa zvemukati mabasa, ini ndingave nechokwadi chekuti chinangwa chako hachisi kutsiva vanhu, ndechekusunungura ivo kuti vaite zvavanogona kwazvo. Kana iwe uchida kuparadza kugadzirwa kwechikwata chako chekushambadzira - ramba uchivaita kuti vashande kunze kwemaspredishiti neemail. Kana iwe uchida kuwedzera kugadzirwa, ita kuti kutenga maturusi kuve kwekutanga kuitira kuti timu yako ive nezvose zvainoda kuti ibudirire.
Pakupedzisira, the Chinangwa chechero hurongwa-hune chekushambadzira inofanirwa kunge iri iyo inogonesa yakawanda inobereka nguva netarisiro yako nevatengi, kwete zvishoma. Gadzira zvimwe zvevatengi vako uye iwe unozokohwa mabhenefiti. Mimwe mienzaniso:
Isu tinoshandisa Mazwi ekushambadzira kusefa pasi uye kuburitsa data reGoogle Analytics nenzira iyo vatengi vedu vanogona kunyatsonzwisisa. Izvo zvinoita kuti tikwanise kutaura zvinoitika uye tipe zano rekuvandudza pane kushandisa nguva kuyedza kutsanangura analytics date.
Isu tinoshandisa gShift kutarisa zvemagariro midhiya uye kutsvaga kwekukanganisa kune mumwe nemumwe uye pazasi mutsara. Kupiwa zvakaoma, kana zvisingaite, pasina chishandiso senge gShift. Kana usiri kuyera mhedzisiro yemaitiro ako zvemukati nenzira kwayo, uchave nenguva yakaoma kutsanangura kuti nei mutengi wako achifanira kuramba achiisa mari mairi.
Isu tinoshandisaHootsuite, Buffer, uye Jetpack kugadzirisa edu ekushambadzira ekuedza. Tichiri timu diki, tinoita ruzha rukuru paInternet. Nekushandisa nguva shoma kushambadzira, ndiri kukwanisa kushandisa yakawanda nguva ndichinyatso kutaurirana nevangu venhau venhau vateereri.
Imwe yeaya maturusi anotigonesa kutarisa kwedu kwazvinofanira kuve pane kushanda pazvinhu zvisina basa izvo vatengi vedu vasingazombokoshesa. Ivo vanoda mhedzisiro - uye isu tinofanirwa kunge tichishanda pavari!
Tags: Analyticsotomatiki zvinangwaautomation maturusiMarketingmarketing automationkubika
Tsvagametrics: Bhizinesi, Dhata-Inotungamirwa SEO Platform
Apr 27, 2016 pa 9: 28 AM
Pakati pemamwe maturusi ekushambadzira edhijitari Goole Analytics ndiyo yakapararira uye inoshandiswa. Ndeapi maitiro ako akanakisa ekushandiswa kweGoogle Analytics mumamiriro ekutengesa / kukura kwemari?
Ita zuva rakakura!
Apr 27, 2016 pa 12: 50 PM
Izvo zvinoenderana nemutengi, asi isu tinowanzo kuda kugadzira mafaneri ekushandura anodzokera kumashure kubva kune chero Call-Ku-Action kusvika painopindwa nemuenzi pasaiti. Uye tsika mishumo yakakosha kuderedza kuvhiringidzika kwevatengi.